Fandoroana biraon’ny kaominina tany Antsirabe : olona 16 niatrika fitsarana, nahazo fahahafahana vonjimaika avokoa | NewsMada
Fandoroana biraon’ny kaominina tany Antsirabe : olona 16 niatrika fitsarana, nahazo fahahafahana vonjimaika avokoa
Niatrika ny fitsarana, omaly tany Antsirabe, ireo olona 16 voarohirohy amin’ny fandoroana ny biraon’ny kaominina Inanantonana. Olona valo izy ireo no voarohirohy tamin’izany, niampy ny ben’ny Tanàna teo aloha sy pasiteran’ny FLM iray, ary olona enina hafa ihany koa. Araka ny vaovao avy any an-toerana, nahazo fahafahana vonjimaika avokoa ireo rehefa avy niatrika ny mpitsara mpanao famotorana.
Ny 4 febroary lasa teo, nisy nandoro io biraon’ny kaominina io noho ny disadisa nisy teo amin’ny andian’olona izay voalaza fa notarihin’ny ben’ny Tanàna teo aloha. May ary maro ny zavatra simba tamin’izany. Nidina tany an-toerana ny Emmo/Reg, noho izany, nandamina ny toe-draharaha. Ny 20 febroary lasa teo, tamin’ny 6 ora maraina, tonga tany amin’ity kaominina ity ny Emmo/Reg rehefa nahazo taratasy avy amin’ny fitsarana ny amin’ny hamantarana sy hisamborana ireo olona voarohirohy amin’ity raharaha ity. Olona fito voasambotra tamin’izany, ary notazonina tao amin’ny brigady Ankazomiriotra.
Nisy andian’olona indray nikasa handoro trano sy hanimba zavatra tamin’izany, ary nitaky ny hamoahana ireo voasambotra. Nizara roa ny Emmo/Reg tamin’izany ary nisy ny voasambotra. Tamin’izany no nampitombo ny isan’ny olona tamin’ity raharaha ity. Tonga maro ny olona teny amin’ny fitsarana tao Antsirabe, omaly. Teny an-toerana ny Emmo/Reg, nilamina ny tanàna.